Maxay ku kala duwan yihiin Jaamacadaha Gaarka loo leeyahay iyo Jaamacadaha Dawladu maalgeliso - qalinkii A/rahman fidhinle UK
Thursday October 15, 2020 - 19:32:23 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Aqoontu waa ruuxiyaadka hogaamiya binu-adamka taas oo shaqsiga horumarkiisa ku hagta kuna hanuunisa. Waxabarashadu waa xuquuq aas aasiya waxaanay kobcisaa oo balaadhisaa caqliga iyo karaamada shaqsiga, waxay qaabeysaa nolosha qofka, waxaana ayu horseedaa in qofku uu gaadho horumar iyo badhaadhe uu noloshiisa horumar ku maareeyo. Maanta Somaalilaan waxaabaaba'ay noloshii macalinka maadaama uu musharkii macalinku uuka yaraaday mushaharkashaqaalaha nadaafada ka shaqeeya taas oo macalinkii iyo maamulihiisiiba ku kaliftay inaylacag aan loo meel deyeynardeyda ka qaataan si ay noloshooda ugu deberaan.
Sida Caalamka oo kale waxbarashada iyo Sabool nimada xidhiidh weyn ayaa ka dhaxeeya.JSL hadii waxbarashada dhalinyarada dan yartu kor u kacdo waxay noqon kartaa dariiq sahlan oo faqiirnimada lagaga bixi karo.. Waxbarashadu waxay fure u tahay dhisme dhaqaale casri ah oo ku saleysan aqoon cokanwaana udub-dhexaadka horumarineed ee ummadded. Haddii aan gacanta la wada gelin waxbarashadadawliga ah oo aan si cadaalad ah loo wadaagin dalku wuxuu noqonayaa dabaqado kala sareeya oo isku dulnool oo is dulmiya.
Somaalilaan Waxaa si hufan uga hawl gala28 Jaamacadood, aqbaliyada Jaamacadaha Somaalilaan waa kuwo gaar loo leeyahay oomacaash-doon ah,Waxaana hada daaladhacaaya3 Jaamacadoodoo aan iyagu ku jirin28-kajaamacadoodlaakiin liisankoodii haysta, Waxaana saqiiray oo Albaabada loo laabayaftartii sanadood ee la soo dhaafay4 Jaamacadood.Jaamacadaha dawliga ah oo gaadhaaya ila7 Jaamacadoodayaan ilaa hadafiigooda iyo hab-dhaqankoodu ka duwanayn Jaamacadaha macaash-doonka ah eegaarka loo leeyahay . Hadaba Wasaaradda Waxbarashada Soomalilaan waxaa looga fadhiyaa inay kala saartoJaamacadaha dawladumaal gelisoiyo Jaamacadaha gaarka loo leeyahay sida ay u kala duwan yihiin dugsiyada Dawliga ah iyoDugsiyada gaarka loo leeyahay.
1- Jaamacadaha Dawliga ah ee Dawladu miisaaniyada buuran siisowaxaa ka mid ah Jaamacada Hargeisa, Jaamacada Camuud, Jaamacada Burco , Jaamacada Nugaal, Jaamacada Ceerigaabo iyo Jaamacada Maakhir.Waxaa loo baahan yahay in Jaamacadaha Dawladu miisaaniyada siisaa inay fuliyaan qodobadan hoose :
- Waa in ardeyda danyarta ah ee waxbarashada Dugsiyada sare heerka sare ka galay ay siiyaan waxbarasho bilaash ah
- Gaar ahaan waa in Jaamacadaha Dawladu ay mudnaan gaar ah siiyaan Ardeyda danyarta ah eeay dhaleen Ciidamada qarankaiyo shaqaalaha dawladu
- Fiiga Jaamacadaha dawladu waa in uu ka yaraadaa kana jabnaadaa Fiiga Jaamacadaha gaarka loo leeyahay sida ay u kala duwan yihiin fiiga dugsiyada dalku.
- Jaamacadaha dawladu waxay ku jiraan dhismeyaal bilaash ah oo dawladu leedahay, kirona ma bixiyaan sidaa daraadeed waa in ay fiiga ardeyda ka jebiyaan
- Jaamacadaha Dawlada Xukuumada ayaa siisa sanad walba miisaaniyada lagu kabo markaa waa in ay fiiga ardeyda Ciidamadu dhaleen bilaash uga dhigaan
- Jaamacadaha dawaladu waxay maydheen meeqaamkii qaranka Somaalilaan, maadaama aanay cashuur buuran dawlada iyo bulshada toonaku soo celin.
Gunaanad: Maanta Soomaalilaan waxaa loo baahan yahay:
1- In la sameeyo Nidaam iyo hab cusub (system dawladeed) oo sife cadaalad ah bulshada ugu shaqeeya, waxna xakameeya .
2- Waana in la ansixiyaa xeerarka qabyada wada ah ee Siyaasadda Waxbarashada Qaranka Somaalilaan.